Vaovao - Fahasamihafana eo amin'ny Lithium Drill 12V sy 16.8V
Ny fampihetseham-pahefana dia matetika ampiasaina amin'ny fiainantsika isan'andro. Rehefa mila mandavaka lavaka na mametraka visy ao an-trano isika dia mila mampiasa torolàlana momba ny herinaratra. Misy ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny fizahana herinaratra. Ny mahazatra dia 12 volt ary 16.8 volts. Dia inona no mahasamihafa azy roa?
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny drindrina herinaratra 12V sy 16.8V?
1.Ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny drills elektrika tanana roa dia ny herinaratra, satria ny voltatra iray dia 12 volt, ny iray hafa dia 16.8 volt, izay azo avahana mivantana, ary hisy fisehoana mazava eo amin'ilay fonosana.
2.Ny hafainganam-pandeha dia hafa. Rehefa mihazakazaka eo ambanin'ny voltages samihafa dia hiteraka hafainganam-pandeha hafa. Raha ampitahaina, ny fandavahana herinaratra 16.8 volt dia hanana hafainganam-pandeha somary lehibe.
3.Ny fahaizan'ny bateria dia tsy mitovy. Noho ny herinaratra samihafa, noho izany dia mila misafidy motera isan-karazany ianao ary manamboara angovo elektronika samihafa. Arakaraky ny haavon'ny herinaratra no avo kokoa ny fahaizan'ny elektronika.
Fanasokajiana ny fandavahana elektrika
1.Zaraina arakaraka ny tanjona dia misy visy na visy atokana ho an'ny tenany, ary hafa ihany koa ny fisafidianana fandavahana herinaratra, ny sasany mety kokoa amin'ny fametahana metaly, ary ny sasany mety amin'ny fitaovana hazo.
2.Zaraina arakaraka ny tanjaky ny bateria, ny mahazatra ampiasaina dia 12 volts, misy 16.8 volts, ary 21 volts.
3.Zaraina arakaraka ny fanasokajiana bateria, ny iray bateria lithium, ary ny iray bateria nickel-chromium. Ny voalohany dia malaza kokoa satria mora entina kokoa izy ary kely ny fatiantoka, fa safidio ny bateria nickel-chromium ny vidin'ny drill ho an'ny herinaratra dia ho lafo kokoa.